Aterineto - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Internet)
Ny Aterineto na Internet dia vondron-tsolosaina afaka mifandray ary mifanakalo fampahalalana. Ny Aterineto dia ampiasaina amin'ny fandefasana fampahalalana hainga amin'ny solosaina erak'izao tontolo izao. Ao amin'ny Aterineto dia ahitana tranonkalan'olon-tsotra, manam-pahaizana, mpivarotra sy ny manao bizinesy ary ny governemanta izay mitatitra karazana fampahalalana maro samihafa ary koa servisy. Ny Aterineto noho izany dia tambajo-tambajotra.
2 Servisy eo amin'i Aterineto
3 Aterineto amin'ny fiarahamonina
3.3 Zava mampidi-doza
Noforonin'ny Advanced Research Projects Agency (ARPA) an'ny departemantan'ny Fiarovana Amerikanina ny Aterineto. Nalefa tamin'ny taona 1969 izy io. Ny World Wide Web ankehitriny dia noforonin'ny britanika Tim Berners-Lee tao amin'i CERN tao Soisa.
Ankehitriny dia aloan'olona vola ny Mpanome Servisy Aterineto mba ahafahany mampiasa Aterineto. Omena maimaimpoana ny servisy sasany eo amin'i Ateriento, ary mampiasa dokam-barotra ireo mpanome servisy mba hahazoany vola amin'izany.
Servisy eo amin'i AterinetoHanova
Ny Aterineto, izay ampiasaina koa ny zavatra maro, toy ny taratasy elektronika, fifandraisana mivantana, fifanakalozan-drakitra sy famindran-drkitra.
Ny World Wide Web no be mpampiasa indrindra eo amin'ny Aterineto ny (izay antsoina koa hoe ny "Web" na Tranonkala). Ahitana ny tranonkala, bilaogy, ary koa ny wikis toy ny Wikipedia. Ny pejin-tranonkala eo amin'ny Aterineto dia afaka ho hita.
Ny fampiasana lehibe an'i Aterineto dia ny fandefasana ary fandraisana ireo mailaka. Ny mailaka dia tsy miankina, ary mandeha amin'ny mpampiasa iray hafa. Ny hafatra (toy ny AIM na ICQ) dia mitovy amin'ny mailaka, fa mamela ny olona roa na mihoatra mba hiresaka amin'izy samy izy haingana be.
Misy fitondram-panjakana mihevitra fa ny Aterineto dia zavatra ratsy, ary manakana ny ampahany na ny Aterineto rehetra. Ohatra, ny governemanta Sinoa dia mihevitra fa ratsy i Wikipedia. Matetika tsy misy olona ao Sina afaka mamaky izany na hanampiana izany. Misy ray aman-dreny manakana ny faritr'Aterineto izay heveriny fa ratsy ho an'ny ankizy. Ireo firenena fantatra manakana ny Aterineto iray manontolo dia i Mianmara ary i Korea Avaratra.
Aterineto amin'ny fiarahamoninaHanova
fiteny fampiasan'ny tranonkala
Mitombo be mihitsy ny fampiasana an'i Aterineto. Tamin'ny taona 2000 hatramin'ny taona 2009 dia nitombo avy amin'ny isa 394 tapitrisa hatramin'ny 1,86 miliara ny isan'ny mpampisa Aterineto. Tamin'ny taona 2010, dia 22%n'ny mponin'izao tontolo izao no nampiasa solsaina ary 1 miliara no isan'ny karoka atao amin'ny alalan'i Google isan'andro, 300 tapitrisa no mamaky blaogy ary 2 miliara no isan'ny lahatssary hita eo amin'i Youtube isan'andro. Tamin'ny taona 2014 dia nihoatra telo miliara no isan'ny mpampiasa Aterineto na 43,6%n'ny mponina fa avy amin'ny firenena manan-karena ny roa ampahatelon'izy ireo: 78% avy ao Eoropa ary 57,4% ao Amerika.
Ny teny ifandraisana eo amin'ny Aterineto dia ny teny anglisy. Izy io dia mety ho vokatry ny fiandohan'ny Aterineto ary koa ny fampiasana ilay fiteny ho lingua franca (teny iombonana). Ny solosaina tany am-piandohany dia tsy afaka naneho soratra afatsy ny soratra tao amin'ny ASCII ihany.
Aorian'ny teny anglisy (fiteny fampiasan'ny 27%n'ny mpampiasa Aterineto), ny fiteny tadiavina indrindra ao amin'ny Aterineto dia ny fiteny sinoa (25%), espaniôla (8%), Japoney (5%) Portogey ary Alemà (samy 4%) Arabo, Frantsay ary Rosiana (samy 3%) ary koreana (2%). Niitatra tamin'ny alalan'ny fampiasana teknolojia maoderina toa ny Unicode ny fisokafan'i Aterineto amin'ny teny vahiny. Na dia izany aza, dia mbola misy foana ireo atao hoe mojibake (tsi-fisehoan'ny soratra amin'ny tenim-pirenena sasany).
Ny Aterineto dia ahafahana miasa amin'ny fomba malalaka kokoa. Azo takarina avy aiza na aiza ny Aterineto, na avy amin'ny finday, na rotera finday izay ahafahan'ny mpampiasa mampiasa Aterineto tsy mila tariby.
Ny Internet koa mety mampidi-doza. Tsy voamarina avokoa ny fampahalalana apetraky ny rehetra ao. Misy aza mety tsy ho marina akory. Ny olona iray dia afaka mametraka fampahalalana eo amina tranonkala, tsy tena hevitra tsara izany raha tsy tena fantany izay ataony. Ny fomba tsara mba hijerena ny vohikala azo antoka dia ny hahazoana antoka ny URL dia manomboka amin'ny https:// fa tsy http://, izany dia midika fa toerana azo antoka (Izany akory dia tsy midika fa azo antoka ilay tranonkala), izany hoe tsy ho voasambotry ny olona eny andalam-pitaterana ny fampahalalana natsofokao.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Aterineto&oldid=773752"
Dernière modification le 30 Novambra 2015, à 23:58
Voaova farany tamin'ny 30 Novambra 2015 amin'ny 23:58 ity pejy ity.